ezaposwa ngomhla 10 / 31 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo nandrolone decanoate.
I-Deca Durabolin iPowder Profile - Yintoni i-Deca Durabolin powder eluhlaza?
I-Deca Durabolin ipowder eluhlaza iyathengiswa yi-anabolic steroid eneempawu ezimbalwa kakhulu ze-androgenic, oko kuthetha ukuba ibonelela ngeenzuzo ezibalaseleyo ezineziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa xa zisetyenziswa ngokufanelekileyo. Eli qela langexesha lonyaka alongezeli ubunzima ngokukhawuleza njengoko abanye besenza, kwaye linesiqingatha sobomi okoko liqhubeka nokukhupha emzimbeni kangangesithuba seeveki ezintathu. Ezinye ii-steroids zongeza ubunzima ngokukhawuleza, kodwa uninzi lolo bunzima ngamanzi. Iziphumo ze-Deca Durabolin eluhlaza okwahlukileyo zahlukile. Ukufumana kuza kancinci, kodwa zikumgangatho ophezulu. Ukucima imeko ye-Deca ecothayo, uninzi lwabakhi bomzimba bayayikhaba imijikelezo yabo ngokwenza izinto ngokukhawuleza Dianabol.
I-Deca Durabolin ipowder ekrwada iyathengiswa iza kwiifom zenaliti, iipilisi, kunye nolwelo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba iipilisi kunye neephilisi zithatha ixesha elide ukusebenza kwaye azifumaneki, uninzi bakha umzimba ukhetha iigciwane. Ngefom yefayili, akukho nhlobo yepotenti elahlekileyo ngexesha lokutya kwaye unokufumana iziphumo ezingcono i milligram ye-milligram. Okubaluleke ngakumbi, ngenxa yokuba le ngxube ehamba ngokukhawuleza kunamanye, awuyi kuba nokukhawuleza "ukukhawuleza" nezinye i-steroids ezinokubangela.
Uyenza njani i-Testosterone Cypionate egqityiweyo kwiPowder Steroid Powers I-PCT Letrozole ipowder eluhlaza-Izinto ezintlanu ekufuneka ndizazile !!!